Soo dejisan Connectify Hotspot 2016.0.3.36821 – Vessoft
Soo dejisan Connectify Hotspot
Connectify kulkulul – xirmo software by taas oo computer ka fuliya doorka ay helaan barta internetka, haddii ay jirto kaarka LAN ama adabtarada ah kaas oo ay taageertaa Wi-Fi ah. Software ayaa si toos ah configures kombiyuutarka sida router dalwaddii oo awood si ay u helaan internet-ka qalab kala duwan. Connectify kulkulul awood u si aad u eegto liiska qalabka xiran, statistics of dhibic isticmaalka helaan iyo qadarka xogta wareejiyo. Software wuxuu kuu ogol yahay user si loo xaqiijiyo ammaanka shabakadda, oo la isticmaalayo algorithm encryption kala duwan. Connectify kulkulul taageertaa tiro badan oo lagu daray, kaas oo u ogolaanaya user inay kordhiso software ah.
Ka bedelaan aad computer galay router dalwaddii
Access to internet ka qalab kala duwan
Taageerada algorithm encryption kala duwan
Connectify Hotspot Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Freegate 7.59
العربية, English, Français, Español... Spotflux 3.1.0.158
English, Українська, Deutsch, Português... MP4 Converter 3.16.16